Halyeeyayaal: La tashiga ardayda SED ee qalin jabisa - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Veterans: SED waxay la tashanaysaa ardayda qalin jabisay
Ruug-dhaqameedyada: SED waxay kala tashataa ardayda qalin jabisa
TELES RELAY 25 July 2019
Ujeeddooyinka kulankan, kobcinta ruuxa hindisaha iyo hal-abuurka.
Xoghayaha Gaashaandhigga ee mas'uul ka ah halyeeyada iyo dhibbanayaashii dagaalka, Koumpa Issa, wuxuu kala tashanayay mowduucan 25 July 2019 magaalada Yaoundé saraakiisha cusub ee la dalacsiiyay.
Isukeenida dhaqaalaha, dib u noqoshada xirfadeed iyo kor u qaadida waajibaadka xurmada leh ee xusuusta iyo xasuusta. Tani waa howsha ugu weyn ee uu u xilsaaray Xoghayaha Arimaha Dibadda ee mas'uul ka ah halyeeyada iyo dhibbanayaasha dagaalka saraakiisha cusub iyo kuwa go'doomiyay. Koumpa Issa wuxuu ku boorinayaa inay ku dhiiri galiyaan shaqaalahooda niyad wanaag iyo hal abuurnimo, si loo hubiyo kormeer wanaagsan iyo maamul wanaaga mustaqbalka. Waa "hawlgal asaasi u ah bulshada" ayuu yidhi Xoghayaha Arimaha Dibada.
Marka loo eego dKu saabsan abaabulka iyo u shaqeynta Xoghaynta Gobolka ee Difaaca Askarta iyo Dhibanayaasha Dagaal, dhaqaalaha iyo taageerada kale ee loogu talagalay halyeeyada iyo dhibbanayaasha dagaalka ayaa ka caawin kara iyaga inay maraan waaxyo kala duwan:
- Maareynta iskuulka muusikada,
- Xarunta Caafimaadka ee Gaarka ah,
- Qalabka hubka iwm.
Qiyaasta kumanaan reer Cameroon, halyeeyayaal iyo dhibbanayaashii dagaalka, waxay matalaan ilaha aan loo dulqaadan karin ee dhiirrigelinta iyo tusaalooyinka jiilka militariga hadda jira marka loo eego hodantinimadoodii hore ee xasuusta gaarka ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.crtv.cm/2019/07/anciens-combattants-le-sed-se-concerte-avec-les-promus/
Kulankii golaha wasiirada ee bishii Luuliyo: xasilinta dhulka iyo in la diro diiwaanka dhulka
Dhacdadii Cameroon-Kondengui: Qaban-qaabiyaasha Shirka Anglophone ayaa dhaleeceeyay dowladda
Tilmaanta ugu wanaagsan ee cusub ee '2019 ki sida loo kasbado' taageerayaasha dhabta ah ee 'Instagram' waxay khiyaameeyaan caddayn - VIDEO
Ivory Coast: Booqashadii Emmanuel Macron ee Abidjan ayaa dib loo dhigay maalmo - JeuneAfrique.com
DADKA & LIFESTYLE7,811